नायक पल शाहविरुद्धको कानुनी प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ ? यस्तो छ अबको प्रक्रिया — Sanchar Kendra
नायक पल शाहविरुद्धको कानुनी प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ ? यस्तो छ अबको प्रक्रिया
काठमाडौं । जबर्जस्ती करणी (बलात्कार)को आरोपमा प्रहरीमा जाहेरी परेको केही दिनपछि नायक पूर्णविक्रम शाह (पल शाह)ले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, तनहुँमा आत्मसमर्पण गरे । जिल्ला अदालतले आइतबार नै उनलाई एक साता हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति दियो । सम्भवतः उनी केही दिन प्रहरी हिरासतमा रहनेछन् र त्यसपछि अदालती प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।